Pee oghere Grid mpempe akwụkwọ Production Line - China Qingdao JBD Machinery
Plastic mpempe akwụkwọ Production Line
Mono Ma ọ bụ Multi Layer mpempe akwụkwọ Production Line
Solid na uzo mpempe akwụkwọ Production Line
Pee oghere Grid mpempe akwụkwọ Production Line
Brand aha: JBD
Mini iji ukwu: 1 WEPỤTARA
Atụmatụ: Chepụta na echiche nke ejiji, mara na agafeghị oke
Oge nzipu: Anọdula site nkwekọrịta
Pee oghere profaịlụ mpempe akwụkwọ ngosi oké elu ìhè transmittance. Ngwaahịa a bụ eguzogide ọgwụ ihu igwe, ọkụ, mmetụta, na bụ ìhè arọ, insulates okpomọkụ, na-eguzogide UV ụzarị. Ụfọdụ n'ime ọtụtụ ngwa na-agụnye ìhè mkpuchite, greenhouses, ime ihe ndozi, ụda proofing ogwe na mgbasa ozi bọọdụ mkpọsa.
Pee oghere profaịlụ mpempe akwụkwọ bụ fechaa, mmetụta na mmanụ na-eguzogide ọgwụ, na waterproof. Ngwa gụnyere nkwakọ containers, ngosi ogwe, kwa ụbọchị na-ihe, agụmakwụkwọ, na-echebe nkwakọ maka ụlọ ihe. Eyi pụrụ kpụrụ n'ime ihe ọ bụla na udi ma na ụdị ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ntụgharị igbe, akụrụngwa igbe na plastic partitions. Nke a bụ magburu onwe ihe ọtụtụ-eji n'ihi na ichebe electronic akụkụ.
Main ụzụ nkọwapụta
Extruder nkọwapụta SJ120 SJ100
Products Obosara 2100mm 1220mm
Products ọkpụrụkpụ 2-8mm 2-8mm
Ike (Max.) 350kg / h 200kg / h
Extruder nkọwapụta SJ120, SJ45 SJ100, SJ45
Products Obosara 2100mm 1300mm
Products ọkpụrụkpụ 4-40mm 4-40mm
Ike (Max.) 450kg / h 300kg / h
Qingdao Jinbei Machinery Co., Ltd. bụ a sara mbara ụlọ ọrụ tụnyere nnyocha sayensị na mmepe, n'ichepụta, nkà na ụzụ ọhụrụ (alo), mmepụta na ahịa. Anyị idozi na mmepe nke "guzo site quality, ịzụlite site technology, omenala mbụ" ebe ọ bụ na ntọala nke ụlọ ọrụ. Anyị ụlọ ọrụ locates na mara mma obodo Qingdao, adaba okporo ụzọ na ebe ndị mara mma na-ewe anyị uru development. Na oké nkwado nke ọtụtụ ahịa na ndị enyi, anyị ụlọ ọrụ na-amalite ngwa ngwa na kpụrụ a otu ụlọ ọrụ na nnyocha sayensị, rụpụta, ahia na debugging. Anyị na-akwanyere ihe ọmụma, banye talent na-etinye ha na mkpa ọnọdụ. Anyị na-elu technology; echesinụ ule dị ka mmepe direction, azụlitewo ọtụtụ iche iche nke plastic mmepụta akara , dị ka plastic osisi / mpempe akwụkwọ igwe ,plastic anwụrụ igwe ,plastic profaịlụ igwe ,WPC igwe ,plastic imegharị ihe maka iji igwe , wdg
Na niile ọrụ, general manager ji obi ụtọ ka niile enyi ileta!
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na China Pee oghere okporo mpempe akwụkwọ mmepụta akara, price, na-eri, maka ire ere, ma ọ bụ PDF, biko chere free ịkpọtụrụ anyị, anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga oghere Grid mpempe akwụkwọ Production Line, Plastic mmepụta Line, Grid mpempe akwụkwọ Production Line emepụta na suppliers.
Previous: 10mm Solid polycarbonate mpempe akwụkwọ Suppliers
Osote: Ịkwanyere Wood Plastic Door Board Production Line
Oghere Grid mpempe akwụkwọ Ime Machine
Multi Layer mpempe akwụkwọ Production Line
Pc mpempe akwụkwọ Machinery
Pc mpempe akwụkwọ Ime Machine
Pee p Pc oghere Grid mpempe akwụkwọ Production Line
Pet mpempe akwụkwọ Machinery
Pet mpempe akwụkwọ Ime Machine
Plastic mpempe akwụkwọ Ime Machine
Pmma mpempe akwụkwọ Machinery
Pmma mpempe akwụkwọ Ime Machine
Ps mpempe akwụkwọ Machinery
Ps mpempe akwụkwọ Ime Machine
ịkwanyere mpempe akwụkwọ Machine
ịkwanyere mpempe akwụkwọ Ime Machine
mpempe akwụkwọ Machinery
Single Layer mpempe akwụkwọ Machinery
Single Layer mpempe akwụkwọ Production Line
Solid & Piel mpempe akwụkwọ Production Line
Transprent mpempe akwụkwọ Machinery
Transprent mpempe akwụkwọ Ime Machine
Transprent mpempe akwụkwọ Production Line
Pee eyi ABS PMMA Mono Ma ọ bụ Mulit Layer mpempe akwụkwọ Extrus ...
Pmma mpempe akwụkwọ Ime Extruding Machine
APET PETG CPET Mono Ma ọ bụ Multi Layer mpempe akwụkwọ Produc ...
Ịkwanyere glazed Ngidi Production Line
Ịkwanyere Mono Ma ọ bụ Multi Layer mpempe akwụkwọ Production Line
XPS ụfụfụ mpempe akwụkwọ extrusion Line
Nke 15, Guangdong Road, Beiguan ulo oru ogige, jiaozhou obodo, Qingdao, China